गाँठो फुकाउन प्रचण्डको अग्रसरता, एमाले किन पछि ? | CHALKHEL.COM
Home पत्रपत्रिकाबाट गाँठो फुकाउन प्रचण्डको अग्रसरता, एमाले किन पछि ?
गाँठो फुकाउन प्रचण्डको अग्रसरता, एमाले किन पछि ?
माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराले अन्तत: राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नु सरकार निर्माणका लागि बाटो खोल्नु रहेको जानकारी दिए। अध्यादेश संसद् बसेको एक महिनाबीच पारित गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा संशोधन गरे हुने कुरामा ठूलो विवादको औचित्य नरहेको महराले स्पष्ट गरे।
Previous articleप्रमुख निर्वाचन आयुक्तकी बुहारी पनि सांसद
Next articleपशुलाई सुत्केरी भत्ता: २ हजार ५ सय